Nin Shiine ah oo la yiraahdo Jiang Feng ayaa xaaskiisii ku furay kuna dacweeyey inay fool xun tahay. Wuuna ku guuleystey dacwadii waxaana loo xukumay 120,000 doolar.
Qoyskan oo aan dhibaato ka dhex jirin ayaa waxaa u dhashay gabadh, taasoo uu Mr. Jiang sheegay inay fool xun tahay isla markaana aanay u ekeyn isaga iyo xaaskiisa midna, wuxuuna bilaabay inuu ka shakiyo xaaskiisa.
Waxay arintaasi keentay in DNA laga qaado gabadhii yareyd waxaana cadaatay inuu isagu dhalay xaaskiisuna aanay khiyaamo samayn, laakiin halkaas kuma dhamaan khilaafkii qoyskan oo ka mid ah qoysaska ugu ladan dalka Shiinaha.
Waxaa arintii soo dhex galay qoyska ay gabadha ka dhalatay oo dhamaantood u eg gabadha yar ee dhalatay, taasina waxay soo dhoweysay in la ogaado meesha sartu ka qudhuntay. Waxay haweeneydii u qiratay ninkeedii Mr. Jiang inay isku samaysay qaliin aad qaali u ah oo 100 kun doolar ay kaga baxday, ayna u aaday qaliinkaa Koonfurta Kuuriya si ay u hesho nin guursada.
Maxkamada ayaa u xukuntay ninkaa in la siiyo 120,000 doolar, maadaama ay khiyaamaysay oo aanay u sheegin inay weji been ah samaysatay. Wuxuu kaloo sheegay Mr. Jiang inaanu ku faraxsanayn xaalkiisa waayo ayuu yiri ma dhali karo caruur kale maadaama gobolkayga laga ogol yahay hal cunug keliya.